बाँकेमा एक चिकित्सकसहित आज थप २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि – BANKE POST
नेपालगन्ज ,२२ साउन – बाँकेमा एक चिकित्सकसहित आज थप २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा जिल्लाका विभिन्न स्थानका २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । संक्रमितमध्ये नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्जमा कार्यरत एक चिकित्सक रहेका छन् । यस्तै बर्दियाका १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अस्पतालले आज जारी गरेको सूचना अनुसार, पछिल्लो ४८ घण्टामा ५ सय ९० जनाको नमूना परीक्षण गर्दा बाँके र बर्दियाका गरी ४२ जनामा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा देशैभर ३ सय ६० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विभिन्न जिल्लामा थपिएका ३ सय ६० जनासहित देशभर संक्रमितको संख्या २१ हजार ७ सय ५० पुगेको जानकारी दिनुभयो । संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म १५ हजार ३ सय ८९ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने ६५ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
जैविक भाइरस मानवजातिको साझा दुश्मन हो, तर अमेरिकी राजनीतिज्ञको राजनीतिक भाइरस पनि त्यत्तिकै घृणित छ किनकि यसले विश्वव्यापी महामारीविरोधी सहयोगलाई क्षति पुर्याएको छ र मानव समाजको दीर्घकालीन सुधार र विकासमा बाधा पुर्याएको छ।राजनीति भित्रका भाइरसले प्राकृतिक ग्लोबलको भाइरस भन्दा धेरै बढी क्षतिहरू प्राप्त गरिसकेका छन। यस बिन्दुमा यस राजनीतिक संक्रमणको ठाउँहरू के के हुन्? यो […]
कार्तिक१३-नेपालगंज नेपालगञ्ज वडा नं. ४ बसपार्क क्षेत्रबाट २९ लाख ४८ हजार ७ सय रकमसहित १० जुवाडे पक्राउ परेका छन् । बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले जिल्लाका प्रतिष्ठित व्यापारी तथा व्यक्तिहरु जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परको जानकारी दिए । पक्राउ परेकालाई जुवा ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएर कारवाही अघि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक रानाले बताए । सामूहिकरुपमा […]
टिक टाेकले कुन अमेरिकी कानुन को उल्लंघन गरेको छ
बाँकेका थप २० जनाले जिते कोरोना